Welcome to Taungoo Blog: March 2008
လIUAပ်EနEသာသူများထံသIU့လွှဲEပြာင်းEပးရမည်။
ပူAIUက်Eသာရာသီတွင် ရင်Eစ့၊ လက်ရှည်၊ ထမီနှင့်
''သဘာဝAလှတရားကIU AံတUသူများ'' Aဖြစ်
AEရးယူရမည်။ (ဤမျှနှင့် မလံUEလာက်ပါက
Eယာင်္ကျားတIU့ ကIU ဂရUမစIUက်Eသာ AမျIUးသမီးများAား
''ဒUက္ခEရာက်သူEနသူကIU လျစ်လျူရှUမှU'' ဖြင့်လည်းEကာင်း၊
AမျIUးသမီးများAား ''လUပ်AားခမEပးဘဲ EစခIUင်းမှUဖြင့်''
ချစ်သူရှIEသာ AမျIUးသားတစ်UီးကIU AခြားAမျIUးသမီးတစ်Uီးမှ
ချစ်စဖွယ်AမူAယာများဖြင့် ချU်းကပ် သIမ်းသွင်းခြင်းကIU
''နွားခIUးမှU'' ဖြင့်လည်းEကာင်း AEရးယူမည်။
မIဘချင်း ရင်းနှီးမှUကIU AသံUးချ၍ ချU်းကပ်လာEသာ
AမျIUးသားများAား ''ယံUကြည်မှUAား AလွဲသံUးစားပြUမှU''
AလွဲသံUးစားပြUမှU '' ဖြင့်လည်းEကာင်း၊
မIမI၏ချစ်သူAား လက်ဖျားနှင့်ပင်မထI၊ shopping mall၊
Eလှာ်ကား၊ Eချာင်းသာ၊ Asia Plaza Hotel (သည်းခံပါ)
စEသာ သမီးရည်းစားတIU့ ၏ Eဆာင်ရွက်ဖွယ် ကIစ္စA၀၀ တIU
့ကIU မပြUလUပ်ပါက ''AလUပ်တာဝန်လစ်ဟင်းမှU''
AIမ်Eထာင်ရှIမIန်းမတIU့ ကIU ပIUးပမ်းသူEယာင်္ကျားများAား
''တားမြစ်နယ်Eမြတွင် AမဲလIUက်မှU '' ဖြင့် AEရးယူမည်။
သူတစ်ပါး၏ Eယာင်္ကျားနှင့် Eပါင်းသင်းEနထIUင်သူ
AမျIUးသမီးများကIU ''မီတာEဘာက်စ် မထားဘဲ
လျှပ်စစ်ဓါတ်AားကIU ခIUးယူသံUးစွဲမှU '' ဖြင့် AEရးယူမည်။
Aသက်(၂၅)နှစ်ပြည့်သူ AမျIUးသား၊ AမျIUးသမီးတIUင်း
AIမ်Eထာင်မပြUရEသးလျှင် ''မIဘကIU ဒUက္ခEပးသူ'' Aဖြစ်
Author : brain wave |
ထုံးစံအတိုင်း ဧပရယ်လ် ၁၃ မှာ သင်္ကြန်ကျတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးက ကားနဲ့သင်္ကြန်ထွက်လည်တယ်။ ကောင်မလေးက ထုံးစံအတိုင်း မဏ္ဍပ်ထိုင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးလည်တဲ့ကားက ကောင်မလေးရဲ့မဏ္ဍပ်ရှေ့ကို ရောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးက ရေပက်တယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးကိုရေသွားလောင်းတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးရေလောင်းတာကို ငြိမ်ပြီးခံတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီမဏ္ဍပ်နားက မခွာတော့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးကလည်း ကောင်လေးကို ခိုးခိုးကြည့်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးရဲ့ရောဂါက ပိုဆိုးသွားတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းလေးရက်လုံး ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးရဲ့မဏ္ဍပ်မှာပဲ တ၀ဲလည်လည်လုပ်နေတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း သတိထားမိတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း မချင့်မရဲဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးဆီသွားပြီး မိတ်ဆက်တယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံပြတယ်။ ကောင်လေးကလည်း အားတက်သွားပြီး ကောင်မလေးကို ထုံးစံအတိုင်း နာမည်တွေမေး ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း နာမည်အမှားတွေ ဖုန်းနံပါတ်အမှားတွေပေိးလိုက်တယ်။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အမှားတွေချည်းပဲပေးလိုက်မှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း မသိချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ လေးရက်ပြည့်တော့ သင်္ကြန်ပြီးသွားတယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးကိုသတိရနေတယ်။ အဲဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်းလိုက်ရှာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲမတွေ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမတွေ့တော့ရင် ဘာမှဆက်ရေးလို့မရတော့တဲ့အတွက် ထုံးစံအတိုင်း မထင်မှတ်ပဲ ပြန်တွေ့ပေးလိုက်ရတယ်။ တနေ့တော့ ကောင်လေးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်းကောင်မလေးက လာထိုင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကောင်လေးအရမ်းပျော်သွားတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အံ့သြသွားတယ်။ ကောင်မလေးက ထုံးစံအတိုင်းပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပဲ သွားပြီး နှုတ်မဆက်ရဲဘူး။ အဲဒီတော့ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးထိုင်တဲ့စက်နားမှာပဲ ယောင်ပေပေလုပ်နေတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးကို စကားပြောချင်လာတယ်။ ခုနက မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားရတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူကစပြီးခေါ်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း GTalk Account တစ်ခုဖွင့်ပေးဖို့ကောင်လေးကို ပြောတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အားရ၀မ်းသာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ Account က သူ့အတွက်ပဲဖွင့်တယ်ဆိုတာ ထုံးစံအတိုင်းကောင်လေးက သိလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကောင်မလေးရဲ့ Account ကို ချက်ခြင်း Invite လုပ်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးရဲ့ Account သစ်လေးမှာ Invite Message တစ်ခုချက်ခြင်းရောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးက ကောင်လေးလက်ချက်မှန်းသိလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ တစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့ Accept ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ GTalk ထဲကနေစကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်လာကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အပြန်အလှန် Mail တွေပို့ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းတစ်နေ့မှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း စဉ်းစားမယ်လို့ပြောတယ်။ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို အဖြေပေးလိုက်တယ်။ ရည်းစားစဖြစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အဲဒီနေ့မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ကန်ဘောင်မှာ သွားထိုင်ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဘူးသီးကြော်မှာစားကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ သိပ်မစားဖြစ်ကြဘူး။ ကန်ဘောင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ထီးလေးကွယ်ပြီးထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ ညနေစောင်းတော့ ထုံးစံအတိုင်း မပြန်ချင်ပြန်ချင်နဲ့ နှစ်ယောက်လုံးထပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးကို လမ်းထိပ်အထိလိုက်ပို့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မခွဲနိုင်မခွာရက်ကြည့်တယ်။ ကောင်မလေးကထုံးစံအတိုင်း လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့ ပြန်သွားရှာတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ကောင်မလေးနောက်ကျောကို ထုံးစံအတိုင်း ရပ်ကြည့်နေတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးတောင် အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူး ကောင်လေးကဖုန်းဆက်နှင့်ပြီးပြီ။ အဲလိုနေရင်းနဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်းသင်္ကြန်ရောက်မယ့် ရက်တွေနီးလာပြန်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး သင်္ကြန်အတူလည်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သင်္ကြန်အကြိုနေ့ကိုရောက်လာတယ်။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ထွက်လည်ကြတယ်။ အကြိုနေ့ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း သိပ်မစည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးရော ကောင်မလေးရော ပျော်နေကြတယ်။ အကျနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်းထွက်လည်ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး အရမ်းပျော်ကြပြန်တယ်။ စည်ကားတဲ့မဏ္ဌပ်တွေကိုလည်း ထုံးစံအတိုင်းရောက်တယ်။ ညနေအထိ လည်ကြပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း အကြိုနေ့ကုန်သွားပြန်တယ်။ အကြတ်နေ့ကို ထုံးစံအတိုင်းရောက်လာပြန်တယ်။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အရင်နေ့တွေထက်ပိုစည်ကားလာတယ်။ သင်္ကြန်လည်နေကျ ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီနေ့မှာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို ၀င်တိုးမိကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီလမ်းထဲမှာတင် နေ့တစ်ဝက်ကျိုးသွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရေစိုလိုက် ၊ နေပူရင်ခြောက်သွားလိုက်နဲ့ အဲဒီထဲမှာပဲ သောင်တင်နေကြတယ်။ မနက်ကရေတွေစိုပြီး နေ့လည်ကျတော့ နေပူပူကြောင့် ခြောက်သွေ့လာတဲ့အချိန်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးခေါင်းတွေတရိပ်ရိပ်မူးလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ဂရုမစိုက်မိဘူး။ ညနေကျတော့ ထုံးစံအတိုင်းရေတွေစိုပြန်တယ်။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး လည်တဲ့ကားလည်း ထုံးစံအတိုင်း ခြောက်နာရီမထိုးခင်မှုာ မဏ္ဌပ်တွေရှေ့ကိုရောက်အောင်တိုးလာနိုင်ခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရေပက်ခံပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကကြတယ်။ ကောင်လေးကတော့ ကောင်မလေးကို ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲထားပြီး မအီမသာနဲ့ ငြိမ်နေတယ်။ ရေစက်ရေပေါက်တွေ… လူသံ.. ကားသံတွေကြားမှာ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကောင်မလေးက ကောင်လေး အဖျားတက်စပြုနေတာကို မသိရှာဘူး။ ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးစိတ်ပူမှာစိုးလို့ မပြောပြဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ထုံးစံအတိုင်း အကြတ်နေ့ပြီးသွားပြန်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးဟာ ညဘက်မှာ အဖျားတွေသိပ်တက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဂရုစိုက်မယ့်သူမရှိဘူး။ ပေကပ်ကပ်ကောင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဆရာဝန်မပြဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပါရာစီတမောလ်ကိုပဲ ထုံးစံအတိုင်းသောက်ထားလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သင်္ကြန်အတက်နေ့မနက်ရောက်လာပြန်တယ်။ ကောင်လေးညက အိပ်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အဖျားနည်းနည်းကျသွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သင်္ကြန်အတက်နေ့ကို နွှဲဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးနဲ့လည် ဖို့ပဲပေါ့။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ဟာ ထုံးစံအတိုင်း တခြားနေ့တွေထက် စည်ကားသက်ဝင်နေတယ်။ ရေပက်ခံနေရင်းကနေပဲ ထုံးစံအတိုင်း ခဏငုပ်နေတဲ့အဖျားက ပြန်တက်လာတယ်။ ကောင်လေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်းကောင်မလေးကို မပြောပြဘူး။ သိပ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကို ထုံးစံအတိုင်းတချိန်လုံးရင်ခွင်ထဲမှာ ထားတယ်။ နေ့လည်ကျတော့ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း နားကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ ရေပက်ခံဖို့ ပြန်ထွက်လာကြတယ်။ သူတို့လည်ကြတဲ့ ကားလေးက ထုံးစံအတိုင်း မဏ္ဌပ်တွေစီတန်းနေရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်တယ်။ ရှေ့ကားနဲ့နောက်ကား ထုံးစံအတိုင်း စကြနောက်ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရေတွေလည်းရွှဲစိုနေတာပဲ။ ကောင်လေး ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်ခမ်းတွေပြာလာတယ်။ တုန်ယင်လာတယ်။ သူတို့ကားလေးက ထုံးစံအတိုင်း မဏ္ဌာပ်ရှင်းတဲ့နေရာရောက်ရင် အရှိန်နဲ့မောင်းတယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း လေစိမ်းတွေကြားမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကပါ စိမ့်ပြီးအေးလာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်တွေလက်တွေပါ ကျဉ်လာတယ်။ ကောင်မလေးကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းလုံးဝမပြောဘူး။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့ဟာ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ခြောက်နာရီကျော်တဲ့အထိ ရေပက်တာမရပ်ကြသေးဘူး။ သူတို့ကားလေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ခြောက်နာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်မှာ အိမ်ပြန်လမ်းပေါ်ကို ဦးတည်မောင်းလာတယ်။ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်းကောင်မလေးကို ပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်ခံရင်းနဲ့ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးစိတ်ထဲမှာ ဆန်းဆန်းကြယ်ကြယ်ဖြစ်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးမျက်နှာကို ချစ်ချစ်မက်မက်ကြည့်မိတယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်မပြန်ချင်သေးတဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်းကောင်လေးကို ကော်ဖီဆိုင်သွားကြရအောင်လို့ ပြောတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ထိုင်နေကျကော်ဖီဆိုင်လေးကိုရောက်သွားတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်လေးထဲမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်းသင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေကို နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဖွင့်နေတယ်။ သင်္ကြန်ကိုချစ်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကြည်ကြည်နူးနူးလေး နားထောင်ရင်း တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ထားကြတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်လေးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း မီးမှိန်ဖျော့ဖျော့လေးပဲ ထွန်းထားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ထားတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ထူးထူးခြားခြားစကားမပြောမိကြပဲ ငြိမ်သက်နေမိတယ်။ အချစ်ရဲ့အရိပ်အငွေ့အောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးက သူ့ဖျားနာမှုကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်တယ်။ ညရှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ကောင်မလေးလမ်းထိပ်အထိ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးကလိုက်ပို့တယ်။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးနဖူးကို ဖွဖွလေးနမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း လက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးလက်ပြတယ်။ ကောင်မလေးလည်း ထုံးစံအတိုင်းပြန်ပြီးလက်ပြလိုက်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ တမျိုးဖြစ်နေတယ်။ လှည့်ပြန်သွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ ကျောပြင်ကို မျက်စိတစ်ဆုံးလိုက်ငေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့မှ စိတ်လေးလေးနဲ့ အိမ်ကိုထုံးစံအတိုင်းပြန်သွားရှာတယ်။ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ကောင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ အ၀တ်အစားလဲပြီး ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ကို ထုံးစံအတိုင်းဖျော်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အဖျားတွေတက်လာတော့တယ်။ အရမ်းကို နာကျင်လေးလံနေတယ်။ ခေါင်းတွေလည်း တရိပ်ရိပ်မူးဝေလာတယ်။ အိမ်ခန်းထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်းလှဲပြီး မှိန်းနေဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ စောင်ခြုံပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကောင်လေးရဲ့ အသိစိတ်တွေ လုံးဝမှောင်မည်းသွားတော့တယ်။ မနက်ကျတော့ ကောင်မလေးက ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးဆီကို ဖုန်းဆက်တယ်။ ကောင်လေးရဲ့ အခန်းထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းခေါ်သံကအော်မြည်နေတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ ကောင်လေးအတွက် ထုံးစံအတိုင်း သူ့ဆီလာတဲ့ဖုန်းသံကို သူကလွဲပြီးဘယ်သူမှ မကြားနိုင်ခဲ့ဘူး။ သတိပြန်လည်မလာတော့တဲ့ ကောင်လေးရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ ခြောက်ခြောက်ခြားခြားဖုန်းသံက တနေ့လုံးလိုလိုအော်မြည်နေရှာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးရဲ့ ဖုန်းခေါ်သံကလွဲပြီး တခြားဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. အဲဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်တွေထုံးစံအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာပြန်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းလောင်မြိုက်ဝါထိန်တဲ့ နေရဲ့အပူကိုတုပမယ့် ပိတောက်ပန်းထိန်ထိန်ဝါ၀ါတွေလည်း ထုံးစံအတိုင်း လင်းလင်းစွေပွင့်လာကြတယ်။ နေရာအနှံ့မှာ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ထုံးစံအတိုင်း မြူးမြူးသွင်သွင် လွင့်ပျံလာတယ်။ အဲဒီသီချင်းတွေကို နားထောင်ရင်း ညိုမှိုင်းကြေကွဲနေတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်လေးကို ပြင်းပြင်းရှရှသတိရနေဆဲပဲ။ အဲဒီသင်္ကြန်သီချင်းတွေထဲကနေ ကောင်လေးနဲ့သူတို့ရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းကို ထုံးစံအတိုင်း သတိရနေခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးမျက်ရည်တွေ ကျလာပြန်တယ်။ ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျက်ရည်စက်တွေက ထုံးစံအတိုင်းမကုန်ခမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပင်အိုရွက်ကြွေတွေပေါ်မှာ ဥသြလေးတစ်ကောင်က ဆွေးဆွေးနင့်နင့် အော်မြည်နေတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ သင်္ကြန်သီချင်းတွေကတော့ လွင့်ပျံနေတယ်………. ထုံးစံအတိုင်း………. အကြိုနေ့ ထုံးစံအတိုင်း……….အကျနေ့ ထုံးစံအတိုင်း……….အကြတ်နေ့ ထုံးစံအတိုင်း………..အတက်နေ့………………………. ……………………. ထုံးစံအတိုင်းရာသီစက်ဝိုင်းရဲ့လည်ပတ်မှုကြားမှာ သင်္ကြန်ပွဲရက်တွေလည်း ထုံးစံအတိုင်း ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်။ အဲဒီသင်္ကြန်ရက်တွေထဲက မထုးဆန်းပေမယ့် ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာလည်း ထုံးစံအတိုင်းလူမသိ သူမသိ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်းသင်္ကြန်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းလည်ပတ်နေဆဲပါပဲ…………
ခေါင်းစဉ် - ရင်၌တည်ရာ
ခေါင်းစဉ် - ဓါတ်ပုံများ, တောင်ငူမြို့ကဘုရားများ
တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံးပါ.
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်တရ်ဆိုတာ သူ့ဆီက ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ ပြန်လိုချင်တဲ့ အတ္တလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်တာရရ်ကြောင့်ပဲ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်တရ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူရှိလာအောင်လေ
ကိုယ်ကပဲ တစ်ဖက်သက် ချစ်နေရတာပါ ဆိုတာကလည်း `သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ ငါပါလား´ လို့ အတွေးမျိုး ကို သာယာမိလို့မဟုတ်လား
အသက်ထက်မြတ်နိုးပါတရ် အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဝူး ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ကိုထားသွားရင် ခံစားရမရ့် နာကျင်မှုကို ကြောက်လို့ပဲလေ
အရာရာမင်းအတွက်ပါဆိုတာက မင်းအတွက်မဟုတ်ဝူးဆိုရင် ကျန်ရစ်မှာစိုးလို့ပေါ့
အရာအားလုံးထက် တန်ဖိုးထားရပါတရ် ဆိုတာတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လွန်းလို့ သူ့ကို တန်ဖိုးထားတာပဲလေ..
လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံးပါ..
ခေါင်းစဉ် - အထွေထွေရေးရာ
တောင်ငူဖိုရမ်အစား တောင်ငူချက်ကို စမ်းသပ်ဆဲကာလအဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်....
မီးသတ်ဆေးဗူး မီးချိတ် မီးကပ် သဲအိတ် ရေအိတ် စသည်တို့အားထားရှိကြရန်
ခေါင်းစဉ် - ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်
ကျွန်တော်တို့တောင်ငူအမှတ်တရ ဘလော့ကလေးကို တောင်ငူမြို့ခံဘလော့ဂ်ဂါတွေ၊ တောင်ငူမြို့ရှိ စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ တောင်ငူနဲ့ဆက်သွယ်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါဝင်ပူးပေါင်းစေလိုပါတယ်။
အခုဆို တောင်ငူမြို့ဟာ သက်တမ်း နှစ် ၅၀၀ ပြည့်တိုင်အောင်ရောက်ရှိပါပြီ။ ဒီ့ထက်ရနိုင်မယ့် တောင်ငူမြို့ရှိ ဘုရားသမိုင်းတွေ၊ သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တွေကို စုံစုံလင်လင်ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် သူငယ်ချင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းက ၀ိုင်းဝန်းပြောပြတင်ဆက်စေလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းကြဖို့ နိုးဆော်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Why Taungoocity blog born
One day our tiny blogger team from Taungoo met atashop as usual and hadadecision to settle site about "Taungoo" - our city.
We aim to build the site but for now we can start only blog for Taungoo city. So the blog come out here.
We want to grow the Taungoo team more than even so we would like to offer the author and the other contributors via online and offline.
Thus please mail to the www.taungoo.net@gmail.com if you have any idea about Taungoo or if you are the person from Taungoo or if Taungoo is your favorite city or if you are Taungoo thar (တောင်ငူသား).
Taungoo - Toungoo - Taungngu
Taungoo (Burmese: တောင်ငူမြို့ ; MLCTS: taung ngu mrui., also known as Toungoo) isacity in the Bago Division of Myanmar, located 220 km from Yangon, towards the northern end of the division, with mountain ranges to both east and west. The main industry is in forestry products, with teak and other hardwoods extracted from the mountains. The city is also known for its areca palms, to the extent thataBurmese proverb for unexpected good fortune is equated toa"betel lover winningatrip to Taungoo".